Tirada caruurta aan la wehlin ee Sweden iska dhiibtay oo siyaaday | Somaliska
Tirada caruurta aan la wehlin ee Sweden iska dhiibtay oo siyaaday
Tirada dadka isku dhiibtay in ay 18 sano ka yaryihiin ayaa siyaaday, tiradii ugu badneyn caalamka ayaa iska dhiibtay Sweden sanadkii 2010 sida uu qoray wargeyska DN. 2,400 qof ayaa isku dhiibay da’yar sanadkii la soo dhaafay taasoo u dhiganta 20% dhamaan da’a yarta iska dhiibtay wadamada kale.
Sida uu qoray wargeyska arintu sidaan ma ahaan jiray iyadoo sanadkii 2006 dhowr boqol oo keliya ay iska dhiibtay Sweden halka kumanaan ay iska dhiibeen Faransiiska iyo Holland. Iyadoo Sweden tirada dadka isku dhiiba da’a yarta ay sadex jibaarantahay sanadkii la soo dhaafay. Sanadkii 2009 ayaa Sweden waxay la mid ahayd Norway iyo UK balse sanadkaan waxay noqotay wadanka ugu qaabilaada badan.
Sababta ayaa lagu macneeyay in wadamada sida UK ay adkeeyeen bixinta degenaanshaha isla markaana ay musaafuriyaan xitaa dadka isku dhiiba da’yarta. Waxaa kale oo la dhihi karaa in sababta ay keentay in muqalasiintu ay heleen wado fudud oo ay dadka ku soo galin karaan Sweden.
Waxyaabaha cunsuriyiiintu ay ku doodaan ayaa waxaa ka mid ah in dadkaan isku dhiibaya caruurta aysan da’a yar ahayn balse ay yihiin dad waaweyn oo nidaamka qayaanaya.
“Dowladu ha u doorto dadka cusub magaaladii ay dagi lahaayeen”
June 19, 2011 at 19:10
ugaaas sawirka caadi mahan abaa
Caruur maahe wa odayaal caruur isku dhiibey